I-coat ye-Oatmeal neerinki
I-Raisins, i-oatmeal, i-coat-oatmeal i-cookie. Kungenzeka uvile i-anecdote endala malunga nendlela, kumbuzo wodokotela, unokufumana njani inetyhefu, umfundi-mpendulo waphendula ukuba mhlawumbi i-coat oatmeal, eyadla ngayo i-vodka kuqala, ngoko ibhiya, kwaye xa kufike ekugqibeleni kwakuyindawo yokuhlala. Ngokuqinisekileyo, wonke umntu uyaziqonda kakuhle ukuba eli lihlazo, oku kulandela ukuba le cookie ayikwazi ukutyhelwa. Ngokuphambene noko, i-coat oatmeal ifanele ibe luncedo njengepargri kule ndawo yokumangalisa, apho bonke abaculi bezilwanyana behlabathi bacebisa. Yaye ukuba udla ii cookie ezimbalwa esikhundleni sesitya se-Herculesan porridge ekuseni, uzonxila ngeglasi yobisi, ngoko kude kube yure ikhefu uya kuba namandla okwaneleyo okwenza ibhizinisi lakho. Ababi beembali zokupheka bakholelwa ukuba i-oatmeal cookies ibonakala ekudleni komntu malunga nexesha elifanayo nesonka. Enyanisweni, okokuqala ii-cookie ze-oatmeal azizange zithobe, kuphela ixesha elide emva koko baqala ukubeka ishukela kunye neezongezo ezahlukahlukeneyo-iisiti, iinqabileyo, iziqhamo ezikhethiweyo. E-Russia, ii-coat oatmeal, ezabhakawa eSt. Petersburg, zazidume ngokukhethekileyo, zilandelwa ngokukodwa kwezinye iidolophu. Ngoku ushishino lokutya luvelisa iintlobo ezininzi ze-oatmeal delicacy, kodwa ingafana njani nomdlalo we-cookie ozobhaka ngezandla zakho uze unike isidlo sakusasa nokuba ushushu.
Ishukela e-Brown 0.5 tbsp.
Ukhula lwegrosi 150 g
I-oat flakes 0.5 tbsp.
Amanzi abilisiwe 0.5 tbsp.
I-Raisin ukukhanya oku-2
Inyathelo 1 Ukulungiselela amakhukhi e-oatmeal sidinga i-oat flakes, iswekile, umgubo, ivenkile kunye neqanda. I-Butter kufuneka ibe sebushushu bombini, iinqabileyo kufuneka zithathwe ezincinane kwaye zifakwe.
Inyathelo 2 Hlanganisa uphinde udibanise kakuhle ibhotela, i-powder powder kunye noshukela omdaka.
Inyathelo 3 I-egg ibethe kancane.
Inyathelo 4 Yongeza iqanda kumxube webhotela uze udibanise kakuhle.
Inyathelo lesi-5 Wongeza ii-0.5 zeekomityi zamanzi afudumele, umgubo, i-oat flakes kunye neerinki.
Inyathelo 6 Gqugquzela kakuhle kude kube lula. Ukuba inhlama iguqula amanzi, unako ukongeza iipuni ezimbini zomgubo kunye ne-oatmeal.
Inyathelo 7 Vala iphepha lokubhaka ngephepha lokubhaka, ugcobe nge bhotela. Ithebula lobuxoki ukubeka inhlama ngokwefake yeekhekhe kumgama we-2-3 cm omnye komnye - kuvela iziqwenga ezingama-20-22.
Isinyathelo 8 Bhaka kwi-oven ye-180 ° C ngaphambi kwimizuzu engama-20-25.
Ikhekhe le-Cottage ushizi ngeomayini
Iimvulophu ngeapulo kunye nama-walnuts
I-oatmeal nge-apple ne-sinamon
I-Cheesecake kunye neziqhamo ezomileyo
Izinto ezinobungozi zamakhemikhali kwizonyiso
Ngendlela efanelekileyo ukucheba imilenze okanye ukukhupha umxhasi?
Agua de Jamaica (ukusela kunye neHibiscus)
Ukusilalisa umzimba kuthintela njani umzimba?
Ndifuna ukubuyisa umthandi wam
I-Horoscope yowesifazane waseTaurus ngo-Agasti 2016